कोमल वली रु*दै मिडियामा, पूर्वसचिवकी छिमेकी वलीले खोलिन् बास्तविकता (भिडियो) – osnepal tv
कोमल वली रु*दै मिडियामा, पूर्वसचिवकी छिमेकी वलीले खोलिन् बास्तविकता (भिडियो)
सोमबार बिहान १० बजे ललितपुरको सानेपास्थित आफ्नै निवासमा मंगलबार बिहान घाइते भेटिएकी पूर्वसचिव अर्जुन कुमार कार्कीकी श्रीमती मुना कार्कीको स्टार अस्पतालमा उपचारका क्रममा नि*धन भएको हो । उनको शंब आफ्नै घर भित्र भेटिएको हो
स्व. कार्की सहित उनको घरमा ५ वर्षदेखि काम गर्दै आएका कामदार विजय चौधरीको पनि श*व फेला परेको छ । चौधरीले आ*त्मह-त्या गरेको प्र-हरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले जनाएको छ । घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको र हालसम्म कसैलाई नियन्त्रणमा नलिएको महानगरीय अ*पराध महाशाखा प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले बताए ।
Previous article आज मंगलबार भक्तिभावले गणेशजीको दर्शन गर्दै जानुहोस् मंगलबारको दिन के के गर्नु हुँदैन
Next article परिवारकै सबैभन्दा प्रिय कामदारले किन लिए पूर्वसचिव पत्नीको ज्या*न ? यसो भन्छ प्रहरी
आज मंगलबार भक्तिभावले गणेशजीको दर्शन गर्दै जानुहोस् मंगलबारको दिन के के गर्नु हुँदैन
परिवारकै सबैभन्दा प्रिय कामदारले किन लिए पूर्वसचिव पत्नीको ज्या*न ? यसो भन्छ प्रहरी